I-Waterfront Home ku-Tidal Marsh - Ukubukeka okuhle! - I-Airbnb
I-Waterfront Home ku-Tidal Marsh - Ukubukeka okuhle!
Itholakala e-Wilmington Island - imizuzu engu-15 ukusuka edolobheni elidumile lase-Savannah nemizuzu engu-15 ukusuka ogwini lwase-Tybee Island - kodwa awazi ukuthi kungani ungafuna ukushiya umbono wethu omuhle we-Half Moon River, i-Wilmington Island Sound, iziqhingi ezivimbelayo kanye nolwandle ngaphesheya! Siqasha indawo ephansi yekhaya lethu leholide elineminyango yalo ehlukene. 900 foot dock ukuze uhambe uye emfuleni uyodoba, ubheke ama-porpoises noma uyogwaja. Buka izindwandwe nama-egret exhaphozini lapho amagagasi aphansi.
I-master bedroom inokubukwa kwamanzi, i-king bed ne-flat screen tv. Igumbi lesibili lokulala linombhede wendlovukazi kanye nesikrini esiyisicaba. Ikhishi lihlome ngokuphelele, linefriji entsha kanye ne-microwave. I-sitting room inamanzi, osofa ababili, itafula lokudlela kanye nesinye i-flat screen esikhulu. Kukhona i-swimming pool enezihlalo zokuphumula kanye nokubuka amanzi. I-grill yegesi iyatholakala. Kukhona ishawa yangasese yangasese emangalisayo.
Umakhelwane uthule futhi unokuthula. Yindawo enhle ongayihamba ngezinyawo. Kukhona inkundla yethenisi yomphakathi, ipaki kanye nomjiko obekwe ngaphakathi kwebanga lokuhamba. Siphinde sahlinzeka ngohlu efulethini lezindawo zokudlela esiqhingini nasenkabeni yedolobha i-Savannah ne-Tybee.
Asibi khona njalo ebusika, kodwa sihlala sitholakala ngomakhalekhukhwini. Siphinde sibe nomphathi wendlu omuhle ohlala endaweni futhi otholakalayo nganoma imiphi imibuzo noma izinkinga. Uma sikhona, sizama ukungaphambuki endleleni yakho!